Press akpụ ogbako - Yuyao Jera Line Dabara Adaba Co., Ltd.
Jera fiber nwere ihe karịrị stampụ 10. The ịpị technology bụ usoro nke na-etinye ewepụghị mpempe akwụkwọ metal na oghere ma ọ bụ eriri igwe ụdị n'ime a pịa akpụ, na mgbe ahụ deform ya (site ekwe, blanking, embossing, coining wdg) iji kwekọọ na size na udi nke na-anwụ, na ihe mgbe ahụ na-ejigide ọdịdị ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Anyị na-eme R&D ma mepee ngwaahịa metụtara mmepụta site na teknụzụ a.
Anyị na-arụpụta akụkụ igwe maka ịgbaso ngwaahịa na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ stampụ:
-Fiber optic arịlịka clamps maka ọgụgụ 8 USB
-Low voltaji mkpuchi ịkpọpu njikọ ya
-Anchor clamps maka eletriki USB
- Ewepụghị dobe waya mwekota na gburugburu waya mwekota
- Igwe anaghị agba nchara nkechi
-Fiber optic cable slack nchekwa mgbodo
-Mkpirisi ọzọ, thimbles, hangers
Ngwa maka stamping pịa na-abụkarị eriri igwe, dị ka igwe anaghị agba nchara SUS 201, SUS 304, Carbon steel, Aluminium, Copper, Brass etc.
A na-enyocha ihe niile dị ka ụkpụrụ nke ISO 9001: 2015, na JERA chọrọ chọrọ.
Site na igwe a, Jera fiber nwere ikike nyocha ma mepụta ngwaahịa ọhụụ ma mee ụfọdụ ndị ahịa chọrọ ngwaahịa dabere na usoro anyị ugbu a. Ọ na - eme Jera fiber nwere ọtụtụ ngwa ahịa iji mejuo ihe dị iche iche ndị ahịa chọrọ. Ngwa ahịa JERA na-asọ mpi n'ahịa
Site na iji teknụzụ a na-akpụ, anyị nwere ike ịmepụta akụkụ igwe niile n'onwe anyị. Ọ na-azọpụta ndị na-eri na-eme ka unit price nke ngwaahịa ndị asọmpi, na anyị nwere ike mfe ịchịkwa àgwà site onwe anyị.